Diyaargarowgaaga oo dhan, fuuliddu waxay diyaar u tahay inay ku dhufato waddada. Laakin habka fuulista, walxahan soo socda waa in si gaar ah looga fogaado: Isticmaalka khaldan ee biriiga Fadlan marka hore jebi shaagaga dambe si aad uga fogaato in xooga bareegu uu aad u weyn yahay oo uu dhaco. Meesha gacanta biriiga waa la bedeli karaa iyadoo loo eegayo...
Waxay u badan tahay inay noqoto xilli-gaaban oo kirismaska ​​alaab-qeybiyeyaasha Mareykanka iyo Yurub. Degdegta Kirismaska ​​ayaa soo dhowaanaysa, laakiin baahida xooggan ee alaabooyinka macaamiisha, yaraanta shaqada, soo noqoshada COVID-19 iyo saamaynta domino ee ay keeneen duufaannada ayaa xannibay dekedo badan oo muhiim ah oo adduunka ah, de...
Saami Cusub !
Waqtigan xaadirka ah, waxaa dalkeena ku cusub kiisas cusub, waxaana la xakameyn doonaa meelaha qaar. Macaamiisha waa inay si degdeg ah u dalbadaan haddii ay u baahan yihiin baaskiil, haddii kale waxaa laga yaabaa inay saameeyaan iibka mustaqbalka iyo wakhtiga keenista. Waqtigan xaadirka ah, waxaan haynaa xulashooyinka agabka soo socda: Carruurta Caaro-caaradu waxay wadaan baaskiil...
Baaskiilada cusub ee carruurta
Carruur caaro baaskiil oo kayd ah . Faahfaahinta: cabbirka 12- 14-16-18-20 inch Midabka: Casaan Buluugga ah, Jaalle, Cagaaran Mootada Mootada Baaskiilada carruurta ee kaydka ah. Faahfaahin: cabbirka 12-14-16 inch Midabka: casaan, cagaar, buluug, oranji
Waa maxay faraqa u dhexeeya baaskiilka buurta iyo baaskiil wadida?
Darawaliinta wadooyinka waxay u baahan yihiin koronto degan oo muddo dheer ah, laakiin sababtuna tahay wadooyinkeena kala duwan iyo tartanka baaskiilka buuraha oo si joogto ah isu bedela, sidaa darteed rookaystayaasha buuruhu waxay inta badan ku sii jiraan muddo koronto oo joogto ah, oo inta badan ay weheliso joogsiga ka hor, inta lagu jiro, iyo ka dib. muddadan wax soo saarka xooggan ee ku tumashada...
Baaskiilku wuxuu u fiican yahay caafimaadka jidhka iyo maskaxda
Baaskiilku kaliya uma roona caafimaadka jidhka iyo maskaxda sidoo kale qofku ha helo wax badan tan iyo markii aan jeclaa baaskiil wadida, ruuxayga oo dhan aad ayuu u fiican yahay hadii aad taqaano qof jecel baaskiilka Hubi mar kasta oo aad raacdo diyaargarowgaaga nooc kasta ah. meesha ugu fudud ee aad ka heli karto goor hore Kadib...
Baaskiilka calool madhan waxay noqon kartaa khatar
by admin 21-10-01
Mid ka mid ah cilladaha ugu hooseeya ee baaskiil wadista sare ee calool madhan waa in jidhku ku tiirsan yahay heterosomes baruurta si ay tamar u helaan marka ay madhan tahay. Waqtigaan, asiidhyada dufanka leh ee bilaashka ah ee dhiigga ku jira ayaa aad u sarreeya. Acids dufanku waa isha tamarta ee hawlaha murqaha sida murqaha wadnaha...
Waxaa maanta si rasmi ah u furmaya tartanka 14-aad ee tartanka ciyaaraha baaskiilka ee wadooyinka.
Finalka baaskiillada ee ciyaaraha 14-aad ee Jamhuuriyadda Shacbiga Shiinaha ayaa bilaaban doona 24-ka Sebtember. 229 ciyaartoy oo ka kala socday 27 xul qaran ayaa isu diiwaan galiyay tartanka afarta maalmood ah, waxaana ka mid ah 132 ciyaartoy oo rag ah iyo 97 ciyaartoy oo dumar ah. Waxaa jira 6 BALADOOD oo dahab ah ragga/woo...
21-ka Sebtembar, waxa ay ku soo beegantay xilli xaflad dhaqameedka dadka Shiinaha ay u dabbaaldegayaan xilliga dayrta ee badhtamaha, Jamhuuriyadda Shacbiga Shiinaha ayaa 14-kii bishii 14-aad ka dhacayay yanan Huangling games ee mashruuca baaskiilka buurta ee finalka kaynta, wadar ahaan 19 kooxood oo ka kala yimid dalka oo dhan (ay ku jiraan naadiga hiwaayadda, iyo...
Talooyinka dayactirka ee baaskiilka carruurta Dayactirka gaariga 1, ka hor inta aan la isticmaalin, kooraha iyo giraangiraha kaaliyaha waa in lagu hagaajiyaa dhererka aad u baahan tahay. 2, Baabuur cusub oo la isticmaalayey muddo ku dhow laba toddobaad, wareegtada hore, dabada dambe, faashashka iyo shaagaga ayaa dib loo dejinayaa, si loo ilaaliyo shaqada caadiga ah. 3, c...
Geed dhaawac ah 01 Beer ku taal Maraykanka 1950-meeyadii. Nin beeraley ah ayaa giraan bir ah ku xidhay mid ka mid ah geedihiisa timirta ah si uu ugu fududeeyo in uu xoolihiisa u xaroodo. Markii cidhifku koray, giraanta birta ayaa si tartiib tartiib ah ugu dartay geedka, taasoo ka tagtay gariir qoto dheer oo maqaarka ah. Hal sano, cudur fangas oo yaab leh ayaa dhacay...
Waa maxay faa'iidooyinka ay carruurtu raacaan baaskiillada? Marka hore, qaabka saxda ah ee fuulitaanka ayaa la samayn karaa 1) La'aanta lugaha ee qaabka-X, oo sax ah oo kubbadda cagta ah, ayaa door ka ciyaara kor u qaadista korriinka iyo korriinka carruurta. 2) Kobcinta isku-dubbaridka iyo isu-dheellitirka Adigoo ku kaxaynaya baaskiillo dusha kala duwan ah, dheelitirka...
Hebei Beimudou Trading Co., Ltd. oo ku yaala Shijiazhuang, Gobolka Hebei, waa shirkad ganacsi oo soo dejinta iyo dhoofinta xirfadeed, waxaan leenahay sanado badan oo khibrad ganacsi baaskiil ah.
Baaskiil loogu talagalay ilmo 48 inch ah, Hablaha Baaskiilka Baaskiilka, Baaskiil/Baaskiilad 12 inch ah, Baaskiilada Baaskiilka Baaskiilada, 20 Inj Baaskiil/Baaskiilad, Baaskiilada dheelitirka,